Abasebenzi bafuna kuxoshwe uDhlomo | News24
Abasebenzi bafuna kuxoshwe uDhlomo
ABASEBENZI boMnyango wezeMpilo esifundazweni iKwaZulu-Natal bathi abasamfuni uNgqongqoshe wezeMpilo kulesi sifundazwe uDkt Sbongiseni Dhlomo ngoba wehlulekile ukwenza umsebenzi wakhe njengongqongqoshe.
Laba basebenzi bamashele eNatalia Building ngoLwesine olwedlule mhla zili-13 kuZibandlela (December) nalapho kade bethi bafuna ukuyobhekana ngqo noDhlomo emehlweni kodwa kabazange bamthole njengoba befice sekuvalwe namasango angenela khona elenga ingidi, kungekho ngisho unogada.
Le mashi isayingxenye yokulwela amalungelo abasebenzi basemakhazeni kahulumeni i-Fort Napier kanye namanye esifundazweni ikwaZulu-Natal.
Abasebenzi basemakhazeni kahulumeni e-Fort Napier babeka phansi amathuluzi bekhala ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo kodwa lokho kwagcina ngokuthi baboshwe njengoba uMnyango wezeMpilo wabatholela incwadi enkantolo eyayibaphoqa ukuthi babuyele emsebenzini.
NgoLwesine olwedlule ngesikhathi kunemashi, laba basebenzi abangaphansi kweNehawu, baqala esiteshini samaphoyisa saseMgungundlovu nalapho babeyofuna khona inombolo yecala (case number) abalivulele uDhlomo.
Unobhala weNational Education, Health and Allied Workers’ Union (Nehawu) esifundeni i-Harry Gwala, uMnuz Zamisile Giyama, uthe leli cala balivula mhla zingama-30 kuLwezi kodwa abakaze bayithole i-case number baze bayithola ngoba sebemashela khona.
Uthe bafuna ukwazi ukuthi amaphoyisa kanti azombopha nini uDhlomo.
“UDhlomo simufuna evalelwe. Lesi yisexwayiso kuDhlomo. Uma kungukuthi akasuli esikhundleni sakhe unyaka wezi-2019 kuzoba wunyaka onzima kuyena. Sikhathele ukulokhu sihambisa uhlu lwezikhalo ngoba vele asizithola izimpendulo.
“UDhlomo sifuna ukumsiza ukuthi abe nesizathu sokuthi asule esikhundleni sakhe ngoba vele wehlulekile ukuba wumholi eMnyangweni wezeMpilo,” kubeka yena.
Usihlalo weCongress of South African Trade Unions (Cosatu) esifundazweni iKwaZulu-Natal, uMnuz Skhumbuzo Mdlalose, uthe bafuna kwenzeke ubulungiswa uDhlomo aboshwe ahambe ayobhekana namacala enkantolo.
“Isifundazwe sesiphenduke indawo yokugcina izilwane.
“Amaphoyisa uma ngabe kufanele ahambe ayobopha uDhlomo ayehluleka kodwa eza egijima uma ngabe ezobopha abasebenzi abalwela izimfuno zabo.
“Kade samvulela uDhlomo icala kodwa yimanxa sinikezwa manje i-case number naye futhi akakaboshwa,” kubeka yena.